बिप्लवद्धारा भोली मगंलबार नेपाल बन्दको घोषणा – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured बिप्लवद्धारा भोली मगंलबार नेपाल बन्दको घोषणा
बिप्लवद्धारा भोली मगंलबार नेपाल बन्दको घोषणा
नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएको विरोधमा भोलि उक्त पार्टीले नेपाल बन्दको आव्हवान गरेको छ ।
प्रहरीबाट पौडेलको हत्या भएको विप्लव समुहको दाबी छ । यद्धपी गृहमन्त्री थापाले सोमबार उनी दोहोरो मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेका छन् । निशस्त्र कार्यकर्ताको हत्या भएपछि विप्लव समुह राज्यप्रति आक्रोशित बनेको छ ।
आफ्ना नेताको हत्याको बदला एकिकृत जनक्रान्तिबाटै लिने उसले चेतावनी समेत दिइसकेको छ । महासचिव विप्लवले समेत पछिल्लो समय जारी गरेको विज्ञप्तिमा
रक्षाका लागि तयार रहनु भन्दै कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
विप्लव नेकपाको सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज रहेका पौडेल बागमती नगरपालिका धरहराका स्थानीय बासिन्दा हुन् । उनै पौडेलको नेतृत्वमा विप्लव नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र प्रहरीबीच केही महिनाअघि पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो । तर, त्यतिबेला भने कुनै मानवीय क्षति भएको थिएन ।
बागमती नगरपालिका धरहरामा सागरनाथ वन परियोजनाको करिब ४ हजार बिघा जग्गा भु-माफियाहरुले कब्जा गर्न खोजे पछी विप्लव नेकपाले कब्जा गरी सुकुम्बासीहरुलाई राखेको थियो ।
पौडेल सुकुम्बासीहरुका बीच निकै प्रिय नेता थिए । पौडेलले भू-माफियाहरुबाट जग्गा खोसेर स्थानीयलाई बसालेपछि उनको सामाजिक छवि सकारात्मक थियो ।
घर जग्गा नभएकालाई मूर्तिया क्षेत्रमा जग्गा दिलाउने, घर बनाउन सहयोग गर्ने आदि काममा कुमार सक्रिय थिए । उनको पक्षमा सारा वस्तीनै थियो । कुमारको निर्देशनमा १० औं हजार मानिस तुरुन्त सडकमा आउन तयार हुन्थे ! तर, एक्कासी उनको किन सरकारले हत्या गर्यो ? गाँउनै शोकाकुल बनेको छ ।
पौडेल नेकपा माओवादी फुटेपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा लागेका थिए । पछि उनी नेत्रविक्रम चन्दले नेकपा बनाएपछि सोही पार्टीको प्रदेश नम्बर २ कै माथिल्लो तहमा थिए । त्यसअघि उनी चुरे भावर पार्टीमा थिए ।
आइए उत्तीर्ण पौडेल सितेरियोका ब्ल्याक बेल्ट समेत हुन् । पूर्व खेलाडीसमेत रहेका पौडेल पहिलेदेखि आँटिलो स्वभावको भएको उनका नजिकका एक आफन्तले बताए ।
मेयरलाई दिइएको थियो कारवाहीको चेतावनी
विप्लव नेकपाले बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
पूर्वमाओवादी मेयर थापाले जनयुद्धकालमा सुराकी गरेको, आर्थिक अपचलन गरेको, भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दी गरेको आरोप लगाउँदै जनताले दण्डित गर्ने चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । पछिल्लो समय सो नगरपालिकामा प्रहरी सक्रियता बढाइएको स्थानीयले बताए ।
कांग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक यादवको राजीनामा